လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘယ်သူတွေ အောင်ပွဲဆင်နိုင်မလဲ ?
ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘယ်သူတွေ အောင်ပွဲဆင်နိုင်မလဲ ?
Labels: Tag, သိသမျှ, အမြင်များ
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ဇွန်လ (၁၁) ရက်နေ့မှစ၍ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကာ ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲစဥ်များကို ဇွန်လ (၁၁) ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ကစားမှာဖြစ်ပြီး၊ ဗိုလ်လုပွဲစဥ်ကို ဇူလိုင် (၁၁) ရက်နေ့ ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်မြိုှု့ရှိ Soccer City ကွင်းမှာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သမုဒ္ဒရာပိုင်းဇုန်မှ ၃ သင်း၊ အာရှဇုန်မှ ၄ သင်း၊ တောင်အမေရိကဇုန်မှ ၅ သင်း၊ အာဖရိကဇုန်မှ ၆ သင်း၊ ဥရောပဇုန်မှ ၁၃ သင်း၊ စုစုပေါင်း ၃၂ သင်း ပါ၀င်ယှဥ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ တစ်အုပ်စုကို ၄ သင်းအဖြစ် ၈ အုပ်စုခွဲကာ ယှဥ်ပြိုင်ကြမှာပါ။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံဟာ အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပဖို့အတွက် အာဖရိကနိုင်ငံများဖြစ်သော အီဂျစ်၊ လစ်ဗျား-တူနီရှား၊ မော်ရိုကိုတို့ အပြိုင်ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့ကြရာမှာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာ အားလုံးထက် မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိကာ အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်၊ ဘရာဇီးလ်၊ ဩစတေးလျား၊ အာဂျင်တီးနား၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်နှင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားကို ရယူခဲ့သော အီတလီ အသင်းတို့ဟာ လက်ရှိ ရေပန်းအစားဆုံး အသင်းများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ၊ စိတ်ထဲကနေ အမှတ်ပြည့်ပေးနေတဲ့ အသင်းနှစ်သင်းရှိပါတယ် --- ပြင်သစ်အသင်းနဲ့ Euro 2008 ဖလားကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သူ စပိန် အသင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့နှစ်သင်းထဲကမှ စပိန်အသင်းကို ပိုပြီး သဘောကျသလို တစ်ပေးထားတယ်။
အခြားရေပန်းစားနေတဲ့ အသင်းများဖြစ်ကြတဲ့ အင်္ဂလန်တို့၊ ဘရာဇီးလ်တို့ကို ဘာလို့များ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ နံပါတ်တစ် မပေးခဲ့လဲဆိုတော့ ၎င်းအသင်းများဟာ အရမ်းကောင်းလွန်းအားကြီးပြီး ကမ္ဘာကျော်ကစားသမားများ အလွန်များပြားစွာ ပါ၀င်နေသော်လည်း စုစည်းညီညွတ်မှုရှိရှိ မကစားနိုင်လို့ပါပဲ။
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား Website မှာ vote results ကို သွားကြည့်မိတော့ ဩစတေးလျအသင်းဟာ ပထမ နေရာရောက်နေပြီး၊ စပိန် ဒုတိယ၊ အာဂျင်တီးနား တတိယ၊ ဘရာဇီးလ် စတုတ္ထနဲ့ အင်္ဂလန် ပဥ္စမဆိုပြီး အသီးသီး မဲများ ရရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ စပိန်အသင်းဟာ တော်တော်များများကလည်း ဖလားရနိုင်တဲ့ အသင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာကို တွေ့ရတော့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
စပိန်အသင်းဟာ Switzerland , Honduras, Chile တို့နဲ့ တစ်အုပ်တည်းပါ။
ဒါကတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေ ကန်မယ့် တောင်အာဖရိကရဲ့ ကွင်း ၁၀ ကွင်းပါ။
ဒါကတော့ ကမ္ဘာ့ဖလား ဖွင့်ပွဲနှင့် နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကို ကျင်းပမယ့် ပရိသတ် ၉၄၇၀၀ ဦး ၀င်ဆံ့တဲ့ ဂျိုဟန်နက်စဘတ်မြိုှု့မှာရှိတဲ့ Soccer City ကွင်းပါပဲ။
အသင်းစည်းလုံးညီလွတ်မှု Team Work ကောင်းဖို့ရယ်၊ ပြီးတော့ Finishing လို့ခေါ်တဲ့ အဆုံးသတ် သေချာမှုတို့ရယ်ဟာ တစ်သင်းနဲ့ တစ်သင်းရဲ့ အားနည်းချက် အားသာချက်ဖြစ်ပြီး ဒီအချက်တွေကပဲ ဖလားရဖို့အတွက် အနီးစပ်ဆုံးပါပဲ။ ကဲ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်ကတော့ စပိန်အသင်းကို အားပေးလိုက်ပြီဗျာ။
လက်ရှိ စပိန်အသင်းရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် လူစာရင်းပါ။
Goalkeepers: Iker Casillas (Real Madrid),Pepe Reina (Liverpool), Diego Lopez (Villarreal)
Ignacio Monreal (Osasuna)
Juanma Mata (Valencia)
စပိန်အသင်းရဲ့ အားထားရသူတွေလို့ ပြောရတဲ့ ဖာဖရီဂတ် နဲ့ ဒေးဗဒ်ဗီလာ တို့ဟာ အခြားအသင်းတွေကို ခြိမ်းခြောက်မှု အပေးနိုင်ဆုံး အတွဲပါပဲ။ ယူရို ၂၀၀၈ ကတည်းက အားလုံးဟာ သူတို့အတွဲကို သတိထားမိလာကြပြီး အသင်းတော်တော်များများက လိုချင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဘာစီလိုနာဟာ ဒေးဗဒ်ဗီလာကို ပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အာဆင်နယ်မှာ ရှိနေတဲ့ ဖာဖရီဂတ်ကို လိုချင်နေတာပါ။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ ယူရို၂၀၀၈ ပြီးကတည်းက အာဆင်နယ်ဟာလည်း သူ့အသင်းမှာ ဖာဖရီဂတ်ရှိနေတဲ့အတွက် ဒေးဗစ်ဗီလာကို လိုချင်နေခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ သူတို့နှစ်ယောက်အပေါ် အသင်းကြီးတွေရဲ့ အလေးထား လိုချင်မှုတွေပါပဲ။ အခု ချစ်ကြည်ရေးပွဲတွေမှာဆိုလည်း ဒေဗစ်ဗီလာဟာ အဆုံးသတ်သေချာမှုတွေနဲ့အတူ အသင်းအတွက် အနိုင်ဂိုးတွေကို သွင်းယူနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်သူဘာပြောပြောနေ ကျွန်တော်ကတော့ စပိန်အသင်းကိုပဲ တစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့ရင်တော့ ဘောလုံးက လုံးနေတာလို့ပဲ ဆင်ခြေ ပေးလိုက်ဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်။
( ကိုအောင် (ပျူနိုင်ငံ)မှ Tag လာတဲ့ Tag Game တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အမြင်တွေနဲ့အတူ ဆောင်းပါးအဖြစ် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ရေးသားချက်များဟာ တစ်ဖက်သက် ဆန်နိုင်ပါတယ်။ )
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Tuesday, June 01, 2010
June 1, 2010 at 6:18:00 PM GMT+6:30
ကေ်းဇူးပါ ကိုလင္းဦးရေ၊ ကိုလင္းဦး ခန္႕မွန္းသလို စပိန္အသင္း ကမၻာ့ဖလား
June 1, 2010 at 7:10:00 PM GMT+6:30
က်နော္လည္း ဒီႏွစ္ စပိန္အသင္းကိုပဲ ရစေခ်င္နေတာ။
Carlos Puyol တစ္ယောက္က လြဲျပီး အားလုံးက ျမန္ဆန္နေတဲ႔ လူလတ္တြေ ျဖစ္နေလို႔ ပိုႏွစ္သက္မိတယ္။
ျပည္႔ျပည္႔စုံစုံ ဖော္ျပပေးလို႔ ကေ်းဇူးပါ။
June 1, 2010 at 9:34:00 PM GMT+6:30
June 2, 2010 at 12:39:00 AM GMT+6:30
ကိုအောင်သာငယ်၊ ကိုသက်ဦး၊ ကိုဆောင်းယနြ်းလ၊ ကိုသစ္နက္ဆူး၊
ကိုကေ်ာ်ဝဏၰ (မမိုးခ်ုိသင်း အမ်ုိးသား)၊ အကိုကြီး ကိုခ်စ်ဖေ၊
ကိုျငိမ်းခ်မ်းအောင်၊ ကိုလူလ၊ ကိုလူထြေး၊ ကိုအိုးဝေအောင်၊
ကိုမိုး၊ မောင္ဖုန်းျမင့်၊ ကိုဥပသကာ၊ ကိုလင်းဦး (စိတ္ပညာ)၊(done)
ကိုဇော္မ်ုိးလငြ်၊ ယောနက်သန်၊ ညီမူရာ၊ ဖူးနုသစ် ၊(done)
အစိမ်းရောင္လငြ်ျပင်၊ sosegado၊ မောင္မ်ုိး
June 2, 2010 at 12:40:00 AM GMT+6:30
စပိန္ကို အရမ္းႀကိဳက္လနြ္းအား ၾကီးလို႕ အခုနောက္ပိုင္း ဘယ္တော့မွ စပိန္ကို အားမပေးတော့ဘူး မွေ်ာ္လင့္တိုင္း မိႈင္းမိႈင္းရီ ျဖစ္ျဖစ္သြားလို႕ဗ်ာ.. ကိုလင္းဦး မွန္းသလို ျဖစ္လာမယ္ ဆိုရင္တော့ ကိုယ္ၾကိဳက္ဖူးခဲ့တဲ့ အသင္း ကမာၻ႕ဖလား ခ်န္ပီယံ ျဖစ္လာတာ ဝမ္းသာရမွာပေါ့.. အဆင္ေျပပါစေဗ်ာ. :))
June 2, 2010 at 6:50:00 AM GMT+6:30
က်နော္က စပိန္ကို ၾကိဳက္တော့ၾကိဳက္တယ္ ၅၀%ပဲ..
June 2, 2010 at 10:17:00 PM GMT+6:30